नेपालीका लागि खुसीको खबर ! को’रोनाका बारे यस्तो खु’लाशा, यसकारण नेपालमा अब तीव्र गतिमा फैलदैन – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालीका लागि खुसीको खबर ! को’रोनाका बारे यस्तो खु’लाशा, यसकारण नेपालमा अब तीव्र गतिमा फैलदैन
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा इपिडिमियोलोजी महाशाखाले नेपालमा अब को’रोना तीब्र गतिमा नफैलने निष्कर्ष निकालेको छ । काठकाडौंमा समुदाय स्तरमा को’रोना फैलन नपाएका कारण अब तीब्र गतिमा को’रोना नफैलने महाशाखाले निष्कर्ष निकालेको हो । तर को’रोना भने रहिरहने उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंमा लकडाउन खुकुलो भएसंगै को’रोना तिब्र रुपमा फैलन अनुमान गरिएको थियो ।
तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । काठमाडौं लगायत मुलुकका सबै स्थानमा को’रोना सं’क्रमितको संख्या घ’ट्दै गएको छ । सरकारले गत जेठ २९ गतेदेखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको हो । त्यस लगत्तै अन्य जिल्लावाट काठमाडौं भित्रनेको संख्या बढेको छ भने जिल्लामा पनि चलह पहल बढ्न थालेको छ । बजार, संघसंस्था, कार्यालयहरु खुलेका छन् । सडकमा सवारी साधन पनि चलेका छन् ।
लकडाउन खुकुलो भएसंगै को’रोना धेरै देखिने आँकलन ग’लत सावित भएको छ । जेठ २९ गते नेपालमा को’रोना सं’क्रमितको संख्या ४ हजार ६१४ थियो। त्यसमध्ये ८६१ जना निको भएका थिए। त्यसपछि झण्डै ४ सयको हाराहारीमा दैनिक वृद्धिदर रहेको नेपालमा असार १९ पछि भने दैनिक सं’क्रमितको संख्या स्वाट्टै घ’टेको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रो’ग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डेले अब नेपालमा को’रोना तिब्र रुपमा नफैलने जनाएका छन् । उनले काठमाडौंमा पनि समुदाय स्तरमा को’रोना नभएका कारण नफैलने जनाएका हुन् । काठमाडौंको ढलमा को’रोनाको कि’टाणु देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदाय स्तरमा को’रोना परिक्षण गरेको थियो ।
को’रोनाको जो’खिममा रहेका ४ हजार जनाको परिक्षण गर्दा ३ जनामा मात्र को’रोना पुष्टि भएको छ । यसले उपत्यकामा समुदायमा को’रोना फैलन नपाएको भन्ने देखाउने उनले बताए । लकडाउन खुकुलो भएको एक महिना बितिसकेको अवस्थामा पनि सं’क्रमितहरुको संख्या नबढ्नुले अब को’रोना तिब्र रुपमा नफैलने लक्षण भएको उनको भनाई छ ।
काठमाडौंमा बाकसमा राखेर फालिएको बच्चा भेटियो, शिशिर भण्डारी पुगेर काख लिदै गरे सहयोग (भिडियो हेर्नुस)